Indlela yokuba intombazane eyisitayela
Umbuzo wokuthi ungabheka kanjani isitayela, abaningi bayamangala. Wonke umuntu ufuna ukubheka isitayela. Ungathenga izinto eziningi zempahla nezindleko kakhulu futhi emgwaqweni uzizwa njenge "izimvu ezimnyama". Isitayela yisimo sakho sangaphakathi, isitayela sakho. Kungaba okuhlukile futhi akudingeki kube yi-classical, njengoba kuvame ukukholelwa.
Ungaba kanjani intombazane enhle?
Ukubukeka ngendlela ehlelekile, akudingekile ukuthenga izinto eziningi ezifashini. Kumele kube nezicucu ezimbalwa ku-wardrobe, kodwa uma uzihlanganisa nezinye izinto, zizobukeka zihle. Kubalulekile ukuhlanganisa izinto ezingahambisani. Uma zihlangene ngokunethezeka, zizoba ukubukeka okubizayo nokuhlelekile. Cabanga ngezinselele ze-wardrobe. Futhi uma kungenamandla emcabangweni, bese uzama izinto esibukweni, khetha inhlanganisela ehlukene yezingubo. Konke isithombe kumele kube kuhle - imicabango, umzimba, izingubo.
Khokha ngokukhethekile izicathulo ezenza owesifazane abe ngowesifazane, kufanele abe ukhululekile, ukhululekile futhi ahambele ikhabethe. Izikebhe ezingahambisani nawe zingaphazamisa isithombe sakho.
Izikebhe kufanele zingabi nalutho futhi kungcono ukuzithenga ezintweni zemvelo. Owesifazane ekhabethe kufanele abe nezicathulo, amabhuzu, izicathulo zakudala nezicathulo zokugqoka nsuku zonke. Kufanele kube ukhululekile, i-gait izoxhomeka kuyo. Uma ugqoka iziqu, uzoba nzima ukuphakamisa imilenze yakho, ukukhubeka, khona-ke uzolahlekelwa kuphela. I-gait yakho kufanele ibe ne-airy, elula.
Abesifazane abaningi bavala ikhabhinethi, kodwa abanakho ukugqoka. Hamba ngezingubo, thatha izinto ezingu-3 ezihlangene. Uma kunesidingo, uthenge into ezosondela ezintweni eziningana. Ungathengi ekuthengiseni, lapho sizithenga khona lezozinto esingazigqoke ngokuvamile. Singabantu abaphumelelayo futhi bangakwazi ukuthenga izinto ezibizayo nezesitayela. Uma uthenga into, qaphela hhayi intengo, kodwa ukwenza kube lula, futhi kwakuyinto yokugqoka.
Uma ugqoka amabhulukwe aqinile, bese ukhetha i-blouse enezandla ezinkulu noma ukusika okuxekethile. Uma uzama ukugcizelela isifuba, ama-trousers kufanele abe mahhala. Uma unquma ukugcizelela iziqhwa nesifuba, khona-ke kuzobukeka kungcolile futhi kungenangqondo, awukwazi neze ukubizwa ngokuthi i-stylish. Uma unembatho enebhande eliqhakazile, lokhu kubuye kufaneleke ne-blouse e-colorful single-colored. Kuwesifazane kufanele kube nehlazo elilodwa, elizokwenza isithombe se-charming, charm kanye nohlobo lwe-charm.
Kubonakala kuhle ukuthi uma izicathulo kanye nekhwama zifana nombala ofanayo, isikhwama asifanele sifane nombala wezingubo zangaphandle, kungcono izicathulo. Ekuseni sezulu, izicathulo kufanele zigqoke amagilavu. Ngokuvamile ukhumbule ukuthi ungowesifazane, ungathwali izinkambiso nawe. Beka ukuthenga okukhulu kwiphakheji ehlukile.
Kubalulekile ukunquma ukuthi yini okudingeka uyigxile - ezindebe noma emehlweni. Uma udinga ukugqamisa amehlo, khetha i-lipstick ithoni yezindebe zakho - i-pink beige noma i-brown shades-pink shades, noma usebenzise i-lipstick ye-hygienic noma i-transparent lip gloss. Futhi uma ubeka amehlo emthunzini we-shades wemvelo, kufanele ukhethe izindebe nge-lipstick ekhanyayo - obomvu, obomvu, i-cherry njalonjalo.
Ukuze ubukeke njengebiza, kufanele ube nezimonyo kanye nekhredithi evela kubakhiqizi abahloniphekile. Emahlweni abantu abazungezile, bazokwenza isithombe sibaluleke. Uma ungakwazi ukuthenga konke okudingayo, yenza up makeup yakho ngenkathi uthenga lipstick kanye mascara.
Amabhlogo anikezela isithombe sesifazane wesifazane, ubuqiniso nokubukeka okuphelile. Lapha into eyinhloko akumele ingaphezu kwayo.
Izinto ezimbalwa ukubuka isitayela:
Ingubo encane emnyama. Kuyo ungaya kunoma yiliphi iqembu, futhi uma uthatha amabhotela nezicathulo, izikebhe ngeke zivinjelwe.
Isiketi somsundu omnyama. Kufanelekile ukugqoka nsuku zonke, ukuze usebenze. Kungagqoke ngezimpawu ezihlukile.
Izibhulu ezijwayelekile ezihambisana nesitayela sebhizinisi.
Ama-Jeans angagqoke ama-sweaters, ama-shirts, ama-blouses nama-tunics.
Izinto okufanele uzithande futhi zingakukhathazi. Ungakhohlwa ukuzibuka. Isitayela sakho yimfihlo yempumelelo yakho. Inhlanhla. Zama futhi uzophumelela.
Isigqoko se-Stellar: sifunda ngosizo lwezintambo zenkanyezi zokwenza ulwelwe lube luncane
Indlela yokugqoka stylishly ngesisindo esiningi
Yini okufanele ugqoke ngenkathi ebandayo?
Iyini umbala wezinwele ezihamba phambili manje?
Isimo somkhosi womshado
Ukuhlanza - isevisi entsha ezokwenza ukuphila kwethu kube lula
Yini ekulindele ngo-Ephreli 2013: umsebenzi
Ice Age embhedeni owodwa
Iziphuzo ekudleni okunomsoco
Amaphilisi okudla: izidakamizwa ezithandwayo neziphumelelayo
Ngingayeka kanjani ukuyeka izinwele ngemuva kokubeletha?
I-Chocolate Fudge nama-hazelnuts nama-walnuts
U-Anastasia Volochkova utshele ngenkinga yangempela yomnikazi wendlu yakhe
Indlela yokubonga ngendlela efanele indoda
Panini nge inkukhu kanye bell pepper
Ukupaka nge-pumpkin filling kanye ne-cream ehlutshiwe